शिवसताक्षी « तपाईंको साझा इजलास
शिवसताक्षी १ मा एमालेको प्यानलै विजयी
शिवसताक्षीलाई सभ्य र समृद्ध नगर बनाउछौं : थोप्रा
शिवसताक्षी । नेकपा एमाले शिवसताक्षी नगरले बृहत र्याली सहित घरदैलो कार्यक्रम गरेको छ । शिवसताक्षीको दूधे बजारबाट सुरु भएको र्याली वडा नं. ९ को विभिन्न स्थानहरुमा कोणसभा गरी दूधेमा आएर
शिवसताक्षीमा एमालेको जीत निश्चित छ : थोप्रा
शिवसताक्षी । नेकपा एमाले शिवसताक्षीले बैसाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनाबका लागि प्रचार प्रसारलाई तीब्रता दिएको छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका लागि युवा उम्मेद्वार मेघहाङ्ग थोप्रा (रोशन)
शिवसताक्षीको मेयरमा एमालेबाट रोशन थोप्रा
झिलझिले- शिवसत्ताक्षी नगरपालिकाको मेयरमा एमालेले रोशन थोप्रा र उपमेयरमा नरमाया कार्कीलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको प्रदेश इन्चार्ज देवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
शिवसताक्षी कांग्रेसका विद्रोह : कांग्रेसका केन्द्रीय र क्षेत्रीय प्रतिनिधी राप्रपाको उम्मेद्वार
शिवसताक्षी । नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा कर्मचारी युनियनका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका छत्रबाबु ओझा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको शिवसताक्षी नगरपालिका वडा नं. ११ का वडाध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिने भएका
असारभित्र सक्नुपर्ने पुलको हालत
बिर्तामोड । झापाको शिवसताक्षी – १० भालु खोलामा निर्माणाधिन पुल अलपत्र परेको छ । पुल सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको मैनाचुली जेभी दमकले ०७९ असारसम्म काम सक्ने सम्झौता गरेको थियो ।
पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा शिवसताक्षीको ११ करोड बढी लगानी
अम्बिका भण्डारी झापा (रासस) । शिवसताक्षी नगरपालिकाले पाँच बर्षको अवधिमा पर्यटकीय स्थलहरुको पूर्वाधार विकासमा रु. ११ करोड २३ लाख बढी लगानी गरेको छ । नगरकै गौरवको आयोजनाका रुपमा सतासीधाम, दोमुखा,
शिवसताक्षीले थाल्यो आवासविहीनलाई घर हस्तान्तरण
शिवसताक्षी । झापाको शिवताक्षीमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बनाएको घर विहीन सुकुम्बासीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । आइतबार शिवसताक्षीका आवासविहीन पाँच परिवारलाई नगरप्रमुख चन्द्रकुमार शेर्मा, उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले घरको चावी हस्तान्तरण
शिवगञ्जमा ‘रिटेल मार्केट’ निर्माण
शिवगञ्ज – ग्रामीण किसानलाई लक्षित गरी शिवसताक्षी नगरपालिका–६ मा ‘रिटेल मार्केट’ निर्माण सुरु गरिएको छ । पालिकाले रु एक करोड चार लाख ६१ हजार लागतमा निर्माण सुरु गरेको मार्केटको ५०
शिवसताक्षीमा चक्रपथ, कालोपत्र धमाधम
झापा, चैत २० गते । शिवसताक्षी नगरपालिकाको नगर गौरवको योजनाअनुरुपको चक्रपथ निर्माण सकिएको छ । चक्रपथ निर्माण भएसँगै स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । शिवसताक्षी नगरपालिका–३ का ७९ वर्षीय नन्दबहादुर भुजेलले आफ्नै
बिर्तामोड ३ मा मदनको अग्रता
झापामा गठबन्धनभित्र माओवादीलाई धोकैधोका
तीन दशकपछि कांग्रेसको पकड क्षेत्रमा मदनको इन्ट्री
दमकमा एमालेकी गीताको मतान्तर १५ मा झर्यो
राप्रपाले गुमायो कचनकवल : अध्यक्षमा कांग्रेस, उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित
हल्दिबारीको अध्यक्षमा राप्रपाका रवीन्द्र लिङ्देन निर्वाचित
कनकाईको मेयरमा एमालेका राजेन्द्र पोखरेल निर्वाचित